Weriye ka tirsan idaacadda codka nabadda oo si xun loogu dhaawacay Bossaso. – Radio Daljir
Seteembar 23, 2011 12:00 b 0
Bossaso, Sept 22 ? Weriye ka tirsan idaacadda codka nabadda ee magaalada Bossaso ayaa maanta barqadii si xun loogu dhaawacay magaalada Bossaso kaddib markii rag hubaysani ay rasaas la beegsadeen xilli uu ku sugnaa meel aad ugu dhaw xarunta idaacadda.
Weriyahaan oo lagu magacaabo Xasan Maxamed Cali ?Anteeno? ayaa waxaa soo gaaray dhaawac aad u halis ah kaddib markii xabaduhu ka haleeleen xabadka iyo halbawlayaal waddanaha la xiriira taasoo galisay marxad miyri-doorsoon.
Raggii falkaasi gaystay ayaa la tilmaamayaa in ay isla markiiba baxsadeen, mana jirto cid aqoonsatay jidka iyo jihada ay ka yimaadeen ama ay ka tirsanaayeen.
Dhaawaca weriyaha, ayaa hadda lagula tacaalayaa isbitaalka guud ee magaalada Bossaso, waxaana ay si aad ah uga dayrinayaan dhakhaatiirta caafimaadku xaaladda fayoobaansho ee weriyahaasi la dhaawacay.
Ma cadda sababta rasmiga ah ee ka dambaysa weerarka lagu dhaawacay weriyahaasi, waxaana falkaani uu ku soo beegmayaa iyadoo todobo cisho ka hor sidaan oo kale magaalada Galkacyo loogu dhaawacay weriye Xorriyo Cabdiqaadir oo u shaqaynaysay Radio Galkacyo.